Mahaiza mitafy ! – FJKM
Antony samihafa no hitan’ny mpandinika ka mahatonga ny olombelona hitafy. Samy tsy nitafy daholo ny tsirairay rehefa nivoaka avy tany am-bohoka.
Ny teny hoe « habit » (fitafiana) sy ny « habitat » (trano) dia avy amin’ny teny latina iray « habitus ». Toy ny trano ihany izany ny fitafiana, « miditra ao » no dikany ara-bakiteny.
Rehefa nanomboka nanintsam-bolo ny vatan’ny olombelona, dia nitsiry koa ny hevitra hitafy. Ny ravinkazo, ny hodi-biby, no anisan’ny niandohan’izany fitafiana izany. Efa tany amin’ny 170.000 taona lasa tany, hoy ny mpikaroka, no efa niakanjo ny olombelona, fa hodi-biby no notafiany talohan’izany.
Ho fiarovany ny tenany tamin’ny loza sy ny toetrandro, ary ny famelezan’ny zavatra ety ivelany, dia nitafy ny olombelona. Hoditra ambonin’ny hoditra ny fitafiana amin’izany, mandrakotra ny tena manontolo.
Nitafy koa ny olombelona, hoy ny Antropology, noho ny antony ara-pananahana. Ny gidro, izay heverina fa akaiky ny olombelona, dia tsy nitafy, ary manao firaisana hatramin’ny imbalo ao anatin’ny indray andro, rehefa lonaka. Miaro ny olombelona tsy hiharan’izany ary ny fitafiana anaovany.
Sady takon-kenatra ny fitafiana, no aro amin’ny fananahana tsy iriana. Nefa taty aoriana, dia lasa fitaovana fanjonoana olona ny fitafiana tsy maotina, ho latsaka amin’ny fananahana tsy mendrika.
3. FANEHOANA NY TENA
Ny fitondrana fitafiana dia entina mampiseho izay vondrona tian’ny tena, na misy ny tena. Izany no dikan’ireny fitafiana mitovy ireny : zandary, mpitsara, pastera, mpisolovava, mpitsabo, mpianatra, sns.
Fa eo ankilan’izany, dia enti-milaza koa ny laharana ao amin’ny fiarahamonina ny fitafiana. Raha fitafiana lafo vidy sy marika vitsy mpanana, dia ho an’ny olona manana fahefa-mividy ambony izany, na ho an’ny olona miavaka. Miteraka fahatokisantena ao amin’izay mitondra azy ireny fitafiana anaovany ireny.
4. FANAFENANA NY TENA
Ny vesatry ny taona sy ny aretina namely dia mahatonga ny vatana ho trotraka miandalana eny koa. Ny fitafiana anefa dia ahafahana manafina azy ireny. Mihatanora ny nahazo taona rehefa manao fitafian’ny tanora. Amin’izany, dia voatahiriny ny tantarany « tanora lalandava », fa tsy simban’ny fotoana sy ny aretina nisy.
Ny fahasahiranana ara-pihariana koa dia mety azo afenina amin’ny fitafiana. Mihaingo daholo ny olona rehetra, ary tsy hita avahana loatra, noho ny fisian’ny akanjo efa niasa (friperie) nefa marika ambony.
5. MAHARAKA TOETRANDRO
Ny fitafiana lamaody dia mikendry hanaraka ny toetrandro sy ny sehatra rehetra. Tsy miandry ho lefy izany, fa misongona izany aza. Vao 6 volana mialoha na mihoatra aza, dia efa vita fikarohana ny ho lamaody hoavy.
Tsy mijanona ho fitafiana fotsiny intsony io rehefa antsoina hoe lamaody. Miditra koa ny kojakoja, ny « maquillage », ny « parfum », ny fanamboarana na fanovana (fandidiana) ny tena koa aza, sns.
Raha manao fitafiana ary ny olona iray, dia milaza ny firehan-kevitra sy ny vondrona ironany izy. Dia inona ny fironana kristiana, sy ny vondrona kristiana, ka itadiavana fitafiana mifanandrify amin’izany ? Tsy manana modelina fitafiana ho an’ny Kristiana ny Soratra Masina, fa fotokevitra no tovozina ao : manome voninahitra an’Andriamanitra (Asa 12 :23), manaja ny tenany (I Pet 3 :3), tsy manafintohina ny vondrona kristiana misy azy araka ny fampianaran’ny Fiangonana.
A. Zaka, Mpitandrina